निराशाजनक उत्साह – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७० मंसिर २८, शुक्रबार ०२:५६ गते
उत्साहपूर्ण निर्वाचनको निकासविहीन परिणाम आएको छ । चुनावमा प्रतिस्पर्धीहरुको हार–जित सामान्य भए पनि हार–जितबाट आउने परिणामले भने सबैले जित्नुपर्दछ । जित्नेले त जित्ने नै भए, हार्नेले पनि जितेको अथवा न्याय पाएको अनुभूति गर्नुपर्दछ । व्यक्तिविशेषले हारे पनि देश र जनताले जित्नुपर्दछ । चुनाव पार्टीको जितका लागि गरिँदैन, देशको जितका लागि गरिन्छ । यस अर्थमा हेर्दा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम असामान्य छ । प्राप्त परिणामबाट देशले निकास पाउँदैन भन्ने लक्षणहरु देखिइरहेका छन् ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा कुनै पार्टीले चुनाव जिते, कुनैले हारे । तर, चार वर्षसम्मको सत्ता लुछाचुँडीको खेलमा भने चुनावमा हारेकाले पनि जिते । सत्ता प्राप्तिको सवालमा हार्ने र जित्नेबीच खासै अन्तर देखिएन । तर, संविधान निर्माणको सवालमा जितेकाले पनि जितेको जस्तो देखिएन । तत्कालीन संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादीमा आफू ठूलो दलको नाताले सधैँ सत्तामा रहनु पर्ने र आफूले भनेको सबैले मान्नुपर्ने भन्ने दम्भ देखियो । उता, अपेक्षाकृत कम सिट ल्याएका काङ्ग्रेस–एमालेलाई पनि एमाओवादीको नेतृत्व स्वीकार्न हीनताबोध भयो । दलहरुबीचको उच्चता–ग्रन्थी र हीनता–ग्रन्थीको लडाइँमा अन्ततः संविधान बनेन ।
दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न हुँदा फेरि उही पहिलो संविधानसभाको नियति दोहोरिएको छ । पात्रहरुचाहिँ परिवर्तन भएका छन्, परिस्थितिचाहिँ दोहोरिएको छ । हिजोको काङ्ग्रेस–एमालेको ठाउँमा आज एमाओवादी छ । हिजोको एमाओवादीको ठाउँमा आज काङ्ग्रेस–एमाले छन् । जब परिस्थिति उस्तै छ भने पात्र परिवर्तनको वर्तमान परिणामले निकास निस्कने आशा गर्नु नै निरर्थक छ ।
निकासको सट्टा समस्या थपियो भन्ने कुराको पुष्टि मतगणनाको परिणामसँगै आएको एमाओवादीको कडा प्रतिक्रियाले पुष्टि गरिसकेको छ । एमाओवादीले मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा नआउनासाथ धाँधलीको हवाला दिएर संविधानसभामै नजाने अप्रिय निर्णय सुनायो । आवेशमै भनेको किन नहोस्, यो भविष्यप्रतिको शुभ सङ्केत होइन । पहिलो संविधानसभामा एमाओवादी ठूलो पार्टी हुँदा काङ्ग्रेस–एमालेले एमाओवादीले धाँधली गरेको आरोप लगाएका थिए, अहिले दोस्रो संविधानसभामा काङ्ग्रेस–एमाले ठूलो हुँदा एमाओवादीले काङ्ग्रेस–एमालेमाथि धाँधलीको आरोप लगाएको छ । बाध्यतावश हिजो काङ्ग्रेस–एमालेले परिणामलाई स्वीकारे झैँ एमाओवादीले पनि ढिलो–चाँडो यो चुनावको परिणामलाई स्वीकार त गर्ला, तर परिणामलाई सहज रुपमा भने उसले लिनेछैन । जब परिणामलाई सहज रुपमा लिइँदैन, तब त्यसबाट निकास निस्कने कुरा कल्पना गर्नु नै व्यर्थ छ । त्यसैले, यो निर्वाचनबाट पनि सरकारी ढुकुटी र समयको बर्बादीबाहेक केही हुनेछैन ।
मतपरिणामलाई जब सहर्ष स्वीकार गरिएन, तब समस्या बल्झाउने कामको सुरूवात त्यहीँबाट भयो । एमाओवादीले परिणाम सहर्ष स्वीकार गरेको भए भविष्यको आशाका किरणहरु देखिने थिए । तर, दिनको लक्षण बिहानीले देखाउँछ भनेझैँ दोस्रो संविधानसभाको बिहानीमै काला बादलका लप्काहरु देखिन थाले । अहिले संविधानसभामै नजाने भनाइलाई अलिकति सुधार गरेर ससर्त संविधानसभामा जाने भने पनि अन्ततः यी सबै सर्त निकासका बाधक नै हुन् । जनमतमा विश्वास गर्ने हो भने कुनै पनि पार्टीले प्राविधिक रुपमा कम सिट प्राप्त गर्दैमा आत्तिन नपर्ने हो । एमाओवादी हारे पनि संविधानसभाको उसको एजेन्डा नहारेकाले उसले हीनताबोध गर्नुपर्ने थिएन । प्राविधिक रुपमा मात्र आफूले कम सिट प्राप्त गरेको ठानेर जनमतलाई शिरोधार्य गरेको भए समाधानको सुरूवात त्यहीँबाट हुन्थ्यो । जनता त्यही सुन्न चाहन्थे तर दुःखद कुरा, त्यस्तो भएन ।
वर्तमान संविधानसभाका लागि वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी हिजै पनि समस्याको रुपमा छँदै थियो, त्यसमाथि वैद्यसँग सहकार्य गर्ने वा मधेसवादी दलहरुसँग सहकार्य गर्ने भन्ने प्रचण्ड धङ्धङीले समस्यालाई झनै चर्काउने देखिन्छ । निकासको हावा विपरीत दिशातिर बगिरहेको छ । राजनीतिक घडीको सुई उल्टो दिशातिर बग्न लागेको छ ।
बाह्र बुँदे समझदारीदेखि नै भन्दै आइएको कुरा के हो भने सहमतिको विकल्प छैन । तर, जतिसुकै सहमतिका नारा फलाके पनि नेपालको राजनीतिमा सहमतिलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको हतियार मात्र बनाइएको छ । वैचारिक द्वन्द्वभन्दा पनि इगोको रापले सहमतिलाई खरानी बनाउन खोज्दैछ । सहमति र इगोबीचको द्वन्द्वमा अहिले इगो हाबी हुन पुगेको छ । सहमतिले हारेको छ, इगोले जितेको छ ।
दलहरुबीच तँ ठूलो कि म ठूलो ? भन्ने द्वन्द्व विगतमा पनि थियो । यो द्वन्द्वमा निर्वाचनको परिणामले झनै घिउ थप्ने काम गरेको छ । जब ठूलो र सानोको कुरा आउँछ, तब सहमति धरापमा पर्छ । हिजो एमाओवादी ठूलो र काङ्ग्रेस–एमाले साना हुँदा संविधान बनेन भनियो, अब भोलि पनि फेरि काङ्ग्रेस–एमाले ठूलो र माओवादी साना हुँदा परिणाम आएन भनिने नै छ । वर्तमान निर्वाचनबाट सबै दल बराबरीको सिट संख्यामा आएको भए सहमतिको राजनीतिलाई मलजल हुनेथियो । हाम्रो वर्तमान राजनीतिको धरातलीय यथार्थ पनि सहमति नै हो । तर विडम्बना, जनमत त्यस्तो आएन । चाहना एकातिर, परिणाम अर्कोतिर भयो ।
आइसकेको परिणाममा अर्को परिणामको खोजी गर्न पनि सकिन्न । अब सकारात्मक हुने हो भने जनमतको आदेश पालना गर्नुको विकल्प छैन । तर विडम्बना, त्यस्तो हुनेवाला छैन । चुनाव हार्ने दलले सकारात्मक विकल्प नदेखेपछि नकारात्मक विकल्पको खोजी भैरहेको छ । नकारात्मक विकल्पको खोजी भनेकै समस्यालाई झनै बल्झाउने काम हो, जुन नियति अब देश र जनताले भोग्नु नै पर्ने छ । आफूलाई जनताले सानो बनाइदिएको झोँकमा देशलाई बन्धक बनाएर क्षतिपूर्ति लिने प्रयास अबका दिनमा हुँदैछ । एकातिर विजय उन्मादमा रहेका दलहरु उत्तेजित अभिव्यक्ति दिएर पराजय भोगेका दलहरुलाई भड्काइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ पराजयको हीनताबोधमा घाइते भएका दलहरु नकारात्मक विकल्पको हतियार तेस्र्याएर विजयी दलहरुलाई घुर्की लगाइरहेका छन् । उत्तेजना र घुर्कीको यो द्वन्द्वमा अन्ततः पिल्सिने भनेको देश र जनता नै हुन् ।
राजनीतिमा सैद्धान्तिक र नीतिगत बहस, द्वन्द्व र असहमति स्वाभाविक हुन् । तर, हामीकहाँ त्यस्ता बहसहरु सधैँ गौण हुन्छन् । शक्तिको बाँडफाँट तथा लेनदेनमा नै दलहरुबीचको द्वन्द्व सीमित छ । राष्ट्रलाई चाहिएको संविधान हो, तर दलहरुबीच विजयको जुलुुस सकिन नपाउँदै को प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति फेर्ने कि नफेर्ने, सभामुख कसले पाउने जस्ता विषयमा बहस केन्द्रित हुन थालेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वका आँखामा आर्थिक विकासका एजेन्डा कहिले पनि प्राथमिकतामा पर्दैन । विकासका बहस पुल र तुलका कुरा गरेर अड्किन्छ । कुनै ठाउँविशेषमा एउटा पुल वा कुलाको कुरा गरेर विकासमा फड्को मार्न सकिँदैन । विकास तपसिलका काम गरेर हुँदैन, देशव्यापी रुपमा विकासको लहर ल्याउनुपर्छ जसरी चुनावी लहर आएको थियो । तर विडम्बना, यस्तो हुनै सकेन । अझै पनि हुने देखिँदैन ।
राजनीतिमा नेताहरुको छाती सधैँ ठूलो बनाउनुपर्दछ । जति ठूलो छाती हुन्छ, त्यति नै सहमति हुन्छ । अत्यन्त सानो छाती र साँघुरो मानसिकता भएका नेताहरुबाट निकासको सम्भावना छैन । सुन्दा अप्रिय भए पनि अब पाँच वर्षमा पनि हुने त्यही नै हो, जो हिजोका पाँच वर्षमा भयो । ठूलो छाती, खुला हृदय र फराकिलो मानसिकता भएको नेतृत्वबिना वर्तमान समस्याको निकास सम्भव छैन, तर त्यस्तो नेतृत्व प्राप्त गर्न अझै कति वर्ष पर्खनुपर्ने हो ! भविष्यले बताउला, भविष्यवाणी गर्न सक्ने अवस्था छैन । लक्षणहरु त्यसतर्फ उन्मुख छैनन् ।
संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएकाले त्यसको एक किसिमको उत्साह त छ, तर उत्साहले निराशा पनि सँगसँगै ल्याएको छ । निराशाजनक उत्साहको यो दोसाँधबाट हामीले उज्यालोतर्फको यात्रा तय गर्नुछ । त्यो उज्यालोतर्फको यात्रामा जान विजयको उन्माद र पराजयको प्रतिशोधी मानसिकता बाधक बनिरहेको छ ।